Kutenga chitima matikiti mu Europe anogara rinonakidza. Kutanga kwazvose, pana Save A Train tiri nguva dzose kutsvaga rweruzhinji chitima matikiti kwamuri. Hatina Akaongorora misoro vakaita zvakanaka Hotels uye yakanaka chitima nzendo. Asi Hottest nyaya iri muchitima indasitiri ndiyo mhepo mvura nenzvimbo. Iyo Coradia Ilint ndiyo yepasirese yepasi-yakakwira chitima chitima. Ndizvo zvimwe chitima chakanyanya kugarisana nenyika.
Itsva yakaderera-kukwira chitima muEurope
The Coradia Ilint ndiyo rehydrogen-inobva pasi-arikuritasva chitima. It nzendo pakati Germany uye Czech Republic. The chitima mutsva achangobva apedza 4-vhiki bvunzo run. Panguva miedzo, chitima akaenda 80 KM paawa. Miedzo uyewo vakafunga hwatsvuka kuti chitima. Zvimwe zvinhu zvichiripo kuedzwa kuitira munhu wakatsetseka chitima rwendo.
Chitima chitsva ndiyo yekutanga nyika hydrogen-powered petero chitima. It anoshandisawo zvemagetsi simba nokuda traction. Kureva kuti ichaburitsa zero zero inoburitsa chete inoburitsa yakanyungudutswa mvura uye mweya. The chitima yakanyarara. The Coradia Ilint yakaderera-Kuda chitima ane zvinotevera nemamwe zvinhu;
Toyota akaedza zvakare dzika rehydrogen ichi kusvika kumotokari dzavo zvinoita sokuti wakaita nzira chete anoshanda nezvitima. The chitima purogiramu vomurova muUK mu 2021. Coradia Ilint chitima chakakwira-chakakwira chakabudirira mukuwedzera kuGerman pakutanga kwe 2018. Kuti chitima chishande chinoda chayo hydrogen refueling chiteshi icho parizvino chiri pamakwara eSalzgitter.
Iyo posvo yakagovaniswa naMaksim Tsurkov (@m_tsurkov)
Buy chitima matikiti mu Europe. Uyezve, zvichida uri kutsvaka nzendo akanaka kana vakangoerekana uchitsanya uye yakachipa pashiri nzira kusvika kwauri kuenda, tine iwe akafukidzwa. Pinda izvozvi ku Save A Train, It chete Zvinotora 3 maminetsi ekushandisa yedu yekutsvaga injini kuti uwane akanyanya kukosheswa matikiti anowanikwa.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fworlds-first-low-riding-train%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#kudzikisira mhepo mvura nenzvimbo nezvitima